ဗေဒင် – Na Pann San
နေမင်းလို ထွန်းလင်းတောက်ပမယ့် လက်သူကြွယ် လက်ချောင်းအောက် မှာ ဒေါင်လိုက် မျဉ်းတိုကလေး
Na Pann San W | June 17, 2020
လက်သူကြွယ် လက်ချောင်း ပိုင်နယ်မြေ က တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္ဂနွေ ဆိုတာ က သူရဇ္ဇ လို့ ခေါ်တဲ့ နေမင်း ၊နေမင်း ဆို တာ က သည်မြေကမ္ဘာ ၏ တန်ခိုးရှင် (တန်ခိုး ) ဆိုတာ က တရုပ် ဘာသာ စကား အလင်း
မမှန်ရင် လျှာအဖြတ်ခံ ရဲပါတယ် ဆိုတဲ့ ( ၂၀၂၀ ) မှာဖြစ်လာမယ့် ကံဇာတာဗေဒင် ဟောစာတမ်း
( 1 ) ဇန်နဝါရီ ဇန်နဝါရီလ မှာ မွေးဖွားသူေ တွ ကတော့ ထူးထူးခြားခြား တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ပဲ သူတို့ရဲ့မွေးနေ့ဟာ..၊ (၁) လပိုင်းအတွင်း ကျရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လမ်းလျှောက်ရင် ဘယ်တစ်လှမ်း၊ ညာတစ်လှမ်း လျှောက်ကြသူများ ဖြစ်ကြပြီး..။ ရေများများသောက်ရင် သေးများများ ပေါက်တတ်တာကိုတော့ သတိထားပေးပါ..။
အကျွန်ုပ် ၏ ဣဌသဘောဆောင် သည့် ကောင်းသော ဟောချက် များ မှန်က န် ၍ ၊ အနိဌသဘောေ ဆာင် သည့် မကောင်းသော ဟောချက် များ တက်တက် စင်အောင် လွဲမှား ပါစေ သ တည်း။ မိတ်ဆွေတို့ ၏ ကောင်းကျိုးများ ကို အစဉ်
သင့် နာမည် ၊ဂုဏ် သတင်း အောင်မြင်ကျော်ကြား ၊ ကြီးပွား ဖို့ ဒီလမ်းကြောင်း​တွေ ပေါ်နေပြီလား…? သင့်မိတ်ဆွေကော….? ဤ လ မ်းကြောင်း အားအောင်မြင်ရေး လမ်းကြောင်း ဟုခေါ်ပြီး လက်သူကြွယ်၏ခြေရင်း တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ခုံ အပေါ် သို့ ထိုးတက်သွားသော လမ်းကြောင်း လည်းဖြစ်သည် ။ ကံလမ်းကြောင်း လည်း ကောင်းမွန်နေ
ဆရာ မင်းသိင်္ခ ၏ ( ၇ ) ရက်သားသမီးများ အတွက် ( ၃၁.၅.၂၀ ) မှ ( ၆.၆.၂၀) ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်းများ အားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရှယ်ပေးနိုင် ပါ တယ်.. ဗေဒင် ဟောကိန်း များသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏
သိန်းသောင်းချီ ပိုင်ဆိုင်နိုင်သော တနင်္ဂနွေ ဂြိုလ်ခုံပေါ်က ငါးရုပ်
Na Pann | May 28, 2020
ကျွန်ုပ် သည် လက္ခဏာပညာ ကို အသက် ၁၃ နှစ်ထဲက လေ့လာ လိုက်စားခဲ့သည် ။ သင်ယူခဲ့သော ပညာရပ်များ ကိုလဲ အပြင်တွင် လက်တွေ့ကျကျလေ့လာ သုံးသပ်ပြီး မှ လက္ခဏာ ဆရာလောက သို့ ဝင်လာ ခဲ့တာပါ ။ လက္ခဏာ ပညာဟာ လူတစ်ယောက် ရဲ့ဘဝ ကို
ခုနှစ်ရက်သားသမီး ၁ ပတ်စာဟောစာတမ်း ( 28.5.2020 မှ 3.6.2020 အထိ )
ဆရာငြိမ်းအေးလူ(ဗေဒင် သုတေသီ) ဟောကြား တွက် ချက်သော ခုနှစ်ရက်သားသမီး ၁ ပတ်စာဟောစာတမ်း တ န င်္ဂနွေ ယခုကာလအတွင်း အမှုအခင်းမဖြစ်ရန် အထူး သတိထားပါ ။ ဖြစ်လျှင် မပြီးနိုင်ဘဲဖြစ်သွားတတ်သည်။ ငွေနှင့် လိုက်လျှင်လည်း ရှုံးသွားတတ်သည်။ ပစ္စည်းများ မငှားပါနှင့်။ မည်သို့သောအကြောင်းအရာများရှိရှိ အားကိုးမည့်သူမရှာပါနှင့်။ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ အစာအဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခြေထောက်၊
“ သက်ရောက်ဂြိုလ် တွက်နည်း ” ( မိမိ ကိုယ်တိုင် ဗေဒင် တွက်ကြည့် လို့ ရ တဲ့ နည်း)
တစ်နှစ် တစ် ခါ မိမိ ကိုယ်တိုင် ဗေဒင် တွက်ကြည့် ဖို့ နည်းလေး ပါ ။ တွက်နည်း မိမိ ရောက်ဆဲ အသက် ကိုတည် ၈ နဲ့စားပါ ။ အကြွင်း ကို ယူ ၍ လက်ယာရစ် ပါ။ ဥပမာ ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီး
Na Pann | May 22, 2020
န ယုန် လဆန်း ( ၁ ) ရက်နေ့ ( ၂၂ .၅ .၂၀၂၀ ) မှ နယုန် လကွယ်နေ့( ၁၉ . ၆ .၂၀၂၀ )အထိ တစ်လတာလုံး မိမိ အိမ် ဘုရားကျောင်း ဆောင် ရှိ မြတ်စွာ ဘုရားရှင်
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း… ( ၂၁.၅.၂၀၂၀ မှ ၂၇.၅.၂၀၂၀ ) ရက် အထိ
Na Pann | May 21, 2020
တနင်္ဂနွေ အလုပ်သစ် ၊ စီးပွားသစ်များ ၊ ရပ်ဝေး ခရီးစဉ်များ အတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ရန် အချိန်အခါ ကောင်းဖြစ်သည် ။ မိမိအထက် အရာရှိများ မိမိကို အုပ်ချုပ်သူများနှင့် သဘောထား ကွဲလွဲမှုရှိနေ ပါလိ မ့် မည် ။ လူမှု ဆက်ဆံရေးများ တွင် အနစ်နာခံရမှုများပြားနေရ ပါလိမ့်